Ra’iisul Wasaaraha Faransiiska oo sheegay in aanay wax xiriir ah laheyn dhacdooyinkii ka dhacay Farance iyo Belgium |
Ra’iisul Wasaaraha Faransiiska oo sheegay in aanay wax xiriir ah laheyn dhacdooyinkii ka dhacay Farance iyo Belgium
Ra’iisul Wasaaraha Faransiiska Manuel Valls ayaa maanta oo jimco ah sheegay in aanay wax xiriir ah aanay laheyn weerarkii Paris ee todobaadkii hore iyo howl galkii Belgium ee lagu dilay kooxo la sheegay inay weeraro abaabulayeen.
Manuel Valls ayaa sheegay in Faransiiska iyo Belgium ay soo food saartay hanjabaado isku mid ah oo argagixiso, waxaana uu meesha ka saaray in howl galkii Ciidamada ka hor taga Argagixisada Belgium ku qaadeen magaalada Verveirs oo ay ku dileen labo ruux aanu xiriir la laheyn kii ka dhacay Paris oo lagu dilay ilaa 12-ruux.
Ciidamada Faransiiska ayaa xir xiray ilaa 12 ruux howl gal xalay ay ka sameeyeen degmooyinka Paris, waxaana dadkaas la weydiinayaa su’aalo la xiriira suurta galnimada in taageero farsamo inay ku lahaayeen weerarkii Paris.
Sideed ka mid ah dadkaas ayaa loo gudbiyay xabsiga, waxaana la sheegay in looga shakisan yahay inay ku taageereen dableydii weerartay Paris hub iyo gaadiid.
Faransiiska ayaa xoojiyay ammaanka dalkiisa, waxaana sugida ammaanka ka qeyb qaadanaya ilaa 120-kun oo askari ah, iyadoo si aad ah loo ilaalinayo goobaha muhiimka ee ku yaala dalkaas, Iskuulada Yuhuuda iyo boosteejooyinka laga raaco Tareenada.
Dhinaca kale Ciidamada Booliska Belgium ayaa dad dheeraad ah u qabtay howl galkii xalay ka dhacay magaalada Ververis ee ku taala bariga dalkaas, waxaana la helay hub, waxyaabaha qarxa iyo lacago.
Dacwad Oogaha Belgium ayaa sheegay in Kooxo Argagixiso ah ay qorsheynayaan inay fuliyaan weeraro lagu qaado Saldhig Boolis iyo toogashooyin wadooyinka loogu geysto Booliska, waxaana labada ruux ee la dilay iyo ruuxa kale ee la qabtay la sheegay inay u safreen Suuriya, kana soo laabteen.
Sidoo kale Ciidamada Jarmalka ayaa iyana xiray labo ruux, kadib howl gal ay ka sameeyeen magaalada Berlin, labada ruux ee la xiray ayaa u kala dhashay dalalka Turkiga iyo Ruushka, kuwaasoo lagu eedeeyay inay geysan rabeen weeraro.
Si kastaba ha ahaatee dalalka reer Yurub ayaa waxaa ka jira saameyn weyn oo ku yeeshay weerarkii todobaadkii hore lagu qaaday Paris, waxaana horay looga digay muwaadiniin heysta dhalashada wadamada reer Yurub oo ku biiray Daacish, kuwaasoo la sheegay inay suura gal tahay inay dib ugu soo laabtaan dalalkooda, isla markaana weeraro geystaan.